Norway oo kala nooc ka dhigaysa dhaqaalaheeda | Gaaloos.com
Home » Layaab » Norway oo kala nooc ka dhigaysa dhaqaalaheeda
Norway ayaa doonaysa inay dhaqaalaheeda ka dhigto noocyo kala duwan iyadoo shidaalkii uu hoos u dhacay.
Hadaad fiirisid Jasiirada Fjord ee Oslo iyo bacaadka xeebta, way sahlan tahay inaad ilowdid in dhaqaalaha Norway uu dhib hayso.
Iyadoo sicirkii shidaalka uu hoos u dhacay, waxaa cadaatay in Norway ay ku tiirsaneed dhaqaalaheeda shidaalka saliida iyo gaaska.
Iyadoo leh maqaayado qaali ah, dhismaha xafiisyada ee Barcode ee ku yaala Sorenga ee biyaha agtiisa ayaa lagu soo xasuusanayaa sida ay Norway dhaqaalaheedu u fiicnaa.
Meeshan ayaa markeedii hore ahayd dekad konteenarada, hadana waa guryo qaali ah ayay sheegtay VibeckeLyse Augdal, oo madax ka ah shirkada kiraysa guryaha ee Utleiemegleren iyadoo ka hadlaysa jasiirada Fjord ee Oslo.
Shidaalka hoos u dhacay darteed Norway ayaa rajaynaysa inay yeelato dhaqaale kala duwan.
Iyadoo dhaqaalaha Norway uu kordhay kadib hoos u dhacii dhaqaalaha adduunka ee 2008-dii, dadka reer Norway ayaa nolol fiican ku jiray. Markii dad badan adduunka ay ku jireen waqti adag, Norway waxay haysatay lacag ay ku dhisto dhismayaashan ku yaala Sorengan.
Norway ayaa noqotay waddamada ugu horeeya ee adduunka ee dhaqaalahoodu kordhayo markii sicirka shidaalka uu gaaray $100 ilaa $120 sanadkii 2011.
Laakiin sanadkii 2013, markii qiimaha shidaalka uu hoos u dhacay waxaa cadaatay dhaqaalaha inuusan dheelitirnayn.
"Shidaalka saliida iyo gaaska ayaa ku awood batay dhaqaalaheena gaar ahaan afartii sano ee ugu danbaysay ayay u sheegtay BBC Ra'iisal wasaararaha Norway Erna Solberg.
Qiimaha lacagta Norway oo hoos u dhacday awgeed rajada waxay tahay inay kororto wax dhoofinta Norway.
"Inta badan kororka dhaqaalaha ayaa ka yimid Shidaalka, lacagteena adagna waxay dib u dhigtay wax dhoofinta ganacsiyo badan.
Dowladda ayaa doonaysa inay samayso isbadal, ayadoo la isticmaalayo shidaalka, waxaan samaynay ganacsiyo kale ayay sheegtay Erna Solberg, waxay saadalinaysaa ra'iisal wasaaraha inuu kordho wax soo saarka Aluminiumka, adeega caafimaadka, iyo wax soo saarka kalluunka.
"Waqtiga dheer, Norway waxay yeelan doontaa dhaqaale kala duwan, taasna waa mid deegaanka u fiican" ayay sheegtay Ra'iisal wasaare Erna Solberg.
Title: Norway oo kala nooc ka dhigaysa dhaqaalaheeda